Fivondronamben'ny Federasiona Ranomasimbe Indiana - ss 4t l0912 lar
Lesona 09 : Ny Fiangonana : Fanompoam-pivavahana samy hafa
24 - 30 Nov. 2012
Fandraisana fanasan'ny Tompo
Alarobia 28 Nov.
Vakio ny Mat. 26:26-28. Inona no hevitra misongadina eo amin’izay asain’i Jesôsy hataontsika eto? Nahoana no zava-dehibe ny tokony handraisana an’ireo ho tandindona?
Nisolo toerana ny andro firavoravoan’ny Paska tamin’ny vanim-potoan’ny fanekena taloha ny Fandraisana ny fanasan’ny Tompo. Nahatratra ny fahatanterahany io andro firavoravoana io rehefa nanolotra ny ainy i Kristy, Zanak’ondrin’ny Paska. I Kristy mihitsy no nametraka io fanoloana io mialoha ny nahafatesany, dia ny fametrahana ny andro firavoaravoana lehiben’ny fiangonan’ny Testamenta Vaovao, eo ambanin’ny fanekena vaovao. Nankalazaina tamin’ny alalan’ny andro firavoravoan’ny Paska ny nanafahana ny Isiraely tamin’ny fanandevozan’ny Egiptianina. Tahaka izany koa no ankalazana ny fanafahana amin’ny fanandevozan’i Egipta ara-panahy, izany hoe ny fatoran’ny ota amin’ny alalan’ny Fandraisana ny fanasan’ny Tompo.
Niaro ny mponina tamin’ny fahafatesana ny nanosorana ny ran’ny zanak’ondrin’ny Paska tamin’ny tataom-baravarana sy ny tolàm-baravarana. Ny fihinanan’izy ireo ny nofon’izany biby izany no nanome hery handositra avy tao Egipta (Eks. 12:3-8). Mitondra fanafahana amin’ny fahafatesana àry izany ny fanatitra nataon’i Kristy; vonjena amin’ny alalan’ny fihinanana ny nofony sy ny rany ny mpino (Jao. 6:54). Ambaran’ny Fandraisana ny fanasan’ny Tompo fa ny fahafatesan’i Kristy teo amin’ny hazo fijaliana no ahazoantsika famonjena, famelan-keloka ary mampanantena antsika ny fandresena ny ota.
Vakio ny 1 Kôr. 11:24-26. Inona no fahamarinana ara-poto-pampianarana lehibe mikasika ny Hazo fijaliana ambara eto?
Hitantsika mazava tsara eto ny lafiny fisoloana amin’ny fahafatesan’i Kristy. Potipotika ny tenany ary nalatsaka ho antsika ny rany; teo amin’ny hazo fijaliana no nandraisany teo Aminy izay tokony ho antsika. Isaky ny mandray ny Fanasan’ny Tompo isika, dia tokony hahatsiaro mandrakariva izay notanterahan’i Kristy ho antsika.
Rehefa ataonao mialoha an’io Fandraisana ny fanasan’ny Tompo io ny fanasan-tongotra, izay manampy amin’ny fiomanan’ny fo, dia tokony ho tsapantsika ihany koa ny toetra maha-iraisan’ny rehetra an’io fanompoam-pivavahana io. Voaseho ara-tandindona amin’ny fomba mahery vaika ny hazo fijaliana amin’ny alalan’ny fandraisana ny mofo sy ny divay. Manjary ao an-tsaintsika mandrakariva àry fa na inona na inona zavatry ny tany mampizarazara antsika, dia samy mpanota mila famindrampo mandrakariva avokoa isika. Tokony hanampy antsika hahafantatra tsara ny andraikitsika ny Fandraisana ny fanasan’ny Tompo, tsy amin’ny Tompo ihany fa amintsika samy isika ihany koa.